Ch 20 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 20 John
20:1 Ary tamin'ny Sabata voalohany, Maria Magdalena nankany amin'ny fasana maraina koa, raha mbola maizina ny andro, ary hitany fa ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana.
20:2 Noho izany, izy nihazakazaka nankany amin'i Simona Petera, ary ilay mpianatra, izay tian'i Jesosy, ary hoy izy taminy, "Nisy naka ny Tompo hiala avy tao am-pasana, ary tsy fantatray izay nametrahany azy. "
20:3 Noho izany, I Petera niala tamin'ny ilay mpianatra, ary dia nankany amin'ny fasana.
20:4 Ary niara-nihazakazaka izy roa lahy, fa ilay mpianatra anankiray nihazakazaka haingana kokoa, mialoha ny Peter, ary noho izany dia tonga teo amin'ny fasana.
20:5 Ary raha niankohoka, dia nahita ny lambam-paty nipetraka teo, fa tsy mbola niditra.
20:6 Ary Simona Petera tonga, nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana, ary nahita ny lambam-paty nipetraka teo,
20:7 ary ny kianja voatokana lamba famaohana izay efa ny lohany, tsy napetraka amin'ny lambam-paty, fa amin'ny kianja voatokana, nahafono ho azy.
20:8 Ary hoy ilay mpianatra, izay efa tonga voalohany teo am-pasana, koa niditra. Ary nahita ka nino.
20:9 Fa tsy mbola izy ireo tsy nahafantatra ny Soratra Masina, fa tsy maintsy ho azy mba hitsangana amin 'ny maty.
20:11 Fa Maria nijanona teo ivelan'ny fasana, fitomaniana. Avy eo, raha izy no nitomany, dia niankohoka teo anatrehany ka nibanjina tao am-pasana.
20:12 Ary izy nahita anjely roa nitafy lamba fotsy, nipetraka teo izay ny fatin'i Jesosy efa napetraka, ny anankiray teo an-doha, ary ny anankiray teo an-tongotra.
20:13 Hoy ireo taminy, "Woman, nahoana ianao no mitomany?"Dia hoy izy taminy, "Satria nalain'olona ny Tompoko, ary tsy fantatro izay nametraka azy. "
20:14 Ary rehefa nilaza izany izy, izy dia nitodika, ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo, saingy tsy fantany hoe i Jesoa io.
20:15 Jesosy nanao taminy hoe:: "Woman, nahoana ianao no mitomany? Iza moa no mitady?"Raha raisina fa ny mpiandry saha, dia hoy izy taminy:, "Tompoko, raha Hianao no nanosika azy, lazao amiko izay nametraka azy, ary izaho dia haka Azy. "
20:16 Jesosy nanao taminy hoe:, "Mary!"Ary Jesosy nitodika nijery, dia hoy izy taminy:, "Rabôny!" (izay midika hoe, Mpampianatra).
20:17 Jesosy nanao taminy hoe:: "Aza kasihina aho. Fa tsy mbola niakatra tany amin'ny Ray. Fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy: 'Aho Miakatra ho any amin'ny Raiko sy ny Rainareo, ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. ' "
20:18 Maria Magdalena nandeha, nanambara ny mpianatra, "Efa nahita ny Tompo, ary izao no zavatra izay hoy izy tamiko. "
20:19 Avy eo, Ary rehefa hariva ny andro izany, tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary nakatona ny varavarana dia izay nivory ny mpianatra, noho ny fahatahorany ny Jiosy, Tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, ary hoy izy taminy: "Fiadanana ho anareo."
20:20 Ary rehefa nilaza izany, dia nasehony azy ny tànany sy ny lafiny. Ary ny mpianatra dia faly raha nahita ny Tompo.
20:21 Noho izany, dia hoy izy taminy indray: "Fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy, no anirahako anareo. "
20:22 Ary rehefa nilaza izany, dia nanisy fofonaina. Ary hoy Izy taminy:: "Raiso ny Fanahy Masina.
20:23 Ireo izay fahotana dia mamela heloka, dia voavela izany, ary ireo izay mitana ny fahotana dia, izy ireo voatana. "
20:24 Ary Thomas, iray amin'ireo roa ambin'ny folo lahy, izay atao hoe ny Twin, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy.
20:25 Noho izany, ny mpianatra niteny taminy hoe, "Efa nahita ny Tompo." Fa hoy Izy taminy:, "Raha tsy Ho hitako eo amin'ny tànany ny mariky ny fantsika ny rantsan-tanako, ary hametraka trano ho ao amin'ilay amin'ny fantsika, ary hametraka ny tanako tao an-side, Aho, dia tsy mba hino. "
20:26 Ary nony afaka havaloana, indray ny mpianany ao, ary teo koa Tomasy. Jesosy tonga, aza ny varavarana efa mihidy, Ary nitsangana teo afovoany ka nanao hoe:, "Fiadanana ho anareo."
20:27 Manaraka, dia hoy izy tamin'i Thomas: "Izahao ny tanako, ary apetraho eto ny rantsan'tananao; ary hitondra ny tananao akaiky, ary apetraho eo amin'ny lanivoako. Ary aza misafidy ny ho tsy mpino, fa ny mahatoky. "
20:28 Thomas namaly ka nanao taminy hoe:, "Tompoko sy Andriamanitro."
20:29 Fa hoy Jesosy taminy: "Efa nahita ahy, Thomas, mba nino. Sambatra izay tsy nahita, nefa nino. "
20:30 Jesosy koa dia vita nisy famantarana maro hafa eo imason'ny mpianany. Ireo tsy voasoratra amin'ity boky ity.
20:31 Fa izany teny izany efa voasoratra, ka mba hinoanareo fa i Jesoa no Kristy, ny Zanak 'Andriamanitra, ary mba, amin'ny finoanareo, ianareo mba hanananareo fiainana amin'ny anarany.